चीन फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउच निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > लचिलो प्याकेजिङ्ग > स्ट्यान्ड अप पाउच > फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरू
फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरू
RJ PACK ले विश्वको शीर्ष लचिलो प्याकेजिङ्ग आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक भएकोमा ठूलो गर्व गर्दछ, समृद्ध अनुभवको साथ, हामी तपाईंलाई प्याकेजिङ्ग समाधान प्रदान गर्न पेशेवर छौं। फ्रि-सेप स्ट्यान्ड अप पाउचहरू परम्परागत स्ट्यान्ड अप पाउचमा एक विशिष्ट र आकर्षक टेक हो। स्ट्यान्ड-अप पाउचहरूको बढ्दो लोकप्रियताको साथ, आकारको पाउच तपाईंको ब्रान्डलाई हालको प्रतिस्पर्धाबाट छुट्याउन र सुपरमार्केट शेल्फमा देखिने सम्भावना बढाउने माध्यम हो। कृपया हामीबाट फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरू किन्नुहोस्।
फ्रि-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरूमा सेल्फ डिस्प्ले र 5-लेआउट प्रिन्ट गर्न मिल्ने सतहलाई बढाउनको लागि समतल आधार हुन्छ जसले उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्छ, तपाईंको उत्पादन पूर्ण रूपमा सीधा खडा छ भनी सुनिश्चित गर्नेछ - उच्च-अन्तको उत्पादन जस्तै सेल्फमा मर्चेन्डाइजिङ गर्नुपर्छ। यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि तपाईंको ब्रान्डले स्टोर र घर दुवैमा तपाईंले यो गर्न चाहेको तरिकाले कार्य गर्दछ; निर्दोष रूपमा। RJ प्याकले विश्वको शीर्ष फ्ल्याट तल्लो प्याकेजिङ्ग आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक भएकोमा ठूलो गर्व गर्छ, समृद्ध अनुभवको साथ, हामी तपाईंलाई प्याकेजिङ समाधान प्रदान गर्न पेशेवर छौं।
फ्रि-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरू तपाईंको उत्पादनलाई उपभोक्ताहरूको घरहरूमा पुर्‍याउने द्रुत तरिका हो किनभने तपाईंको उत्पादनमा तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा बढी मार्केटिङ अपील हुनेछ।
फ्रि-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरूले तपाइँको ब्रान्डिङलाई सुदृढ पार्न सक्छ, प्याकेज प्रयोग गर्न सजिलो बनाएर सुविधा थप्न सक्छ, र थप स्थिरता प्रदान गर्ने वा "तनाव क्र्याकिङ" लाई रोक्न जस्ता संरचनात्मक लाभहरू पनि प्रदान गर्दछ।
3. फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउच सुविधा र अनुप्रयोग
1) अद्वितीय आकार
पाउच आकारहरू तपाईंको उत्पादन र विशिष्टताहरूमा आधारित पूर्ण रूपमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। हाम्रो उपलब्ध डाइजबाट छनौट गर्नुहोस् वा ग्राहक-केन्द्रित र भीडबाट अलग देखिने तपाईंको आफ्नै अनुकूलन आकार सिर्जना गर्न हामीसँग काम गर्नुहोस्।
2) सुविधाजनक सुविधाहरू
थपिएको निजीकरण र शेल्फ अपीलको लागि तपाईंको पाउच आकारमा थप सुविधाहरू समावेश गर्नुहोस्। भौतिक फिटमेन्टको आवश्यकता बिना थप सुविधा र उपयोगिताको लागि स्पाउट आकारमा निर्मित एक घण्टाग्लास पाउच छनौट गर्नुहोस्।
३)। खाद्य ग्रेड सामग्री
हाम्रा सबै आकारका पाउचहरू हाम्रो BRC मान्यता प्राप्त उत्पादन सुविधामा यो उच्चतम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिन्छ।
स्न्याक्स, पाल्तु जनावरको खाना, कफी, चिया, मसला, चामल आदि प्याकिङमा नि:शुल्क आकारको स्ट्यान्ड अप पाउचहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
4. फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउच विवरणहरू
फ्रि-सेप स्ट्यान्ड अप पाउचहरू पनि3प्यानलहरू, अगाडि, पछाडि र तल्लो गसेट समावेश छन्। तर तपाईं यसलाई अद्वितीय बनाउन विशेष आकारमा बनाउन सक्नुहुन्छ।
5.फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउच योग्यता
6. नि: शुल्क आकारको स्ट्यान्ड अप पाउचहरू वितरण, ढुवानी र सेवा
म फ्रि-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको अर्डर मात्रा अनुसार 20 - 40 दिन लिन्छु
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग यी वातावरणीय फ्री-आकार स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको लागि पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल प्रमाणपत्रहरू पनि छन्।
हाम्रा उत्पादनहरूमा स्ट्यान्ड अप पाउच, गसेट ब्याग, फ्रि-सेप स्ट्यान्ड अप पाउचहरू, २/३ साइड सिल ब्याग, स्पाउट पाउच र रोल स्टक फिल्म, आदि समावेश छन्। र हामीसँग पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल लचिलो प्याकेजिङ्ग उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने प्रशस्त अनुभव छ।